18 octobre 202017 h 15 min
Misaotran’Andriamanitra lehibe indray isika raha hafaka mifampizara eto androany. Tena tia antsika tokoa Jesosy. Raha heverina ny zavatra rehetra izay nataony mba hamonjena antsika dia tsy takatry ny saina. Matoa izao sy ianao mbola toy izao dia nohon’ny fitiavany sy ny famindrampony.
Mba efa noheverinao ve izany fitiavan’i Jesosy anao izany? Mety mieritr’eritra ianao hoe mandeha ho azy ny fiainana. Kanefa Matoa izao sy ianao mbola velon’aina dia nohon’ny amin’i Jesosy. teny nentin’i rahalahy Naivo
« Mamoaza voa
Saina madio »